Ololaha amni daro iyo colaadaha ay huruneyso Dowladda Federaalka oo digniin culus laga soo saaray - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Ololaha amni daro iyo colaadaha ay huruneyso Dowladda Federaalka oo digniin culus...
Ololaha amni daro iyo colaadaha ay huruneyso Dowladda Federaalka oo digniin culus laga soo saaray
Siyaasi Cabdiraxmaan Odowaa ayaa ka digay “olole colaad hurineysa oo dowladda federaalka iyo maamulka ay xooga ku dhisatay ee Galmudug uu ka wado degaano kamid ah dowlad goboleedka”.
Xildhibaabkaan ka tirsan Aqalka Hoose ee baarlamaanka federaalka ayaa ujeedada laga leeyahay dhaqdhaqaaqaas ku qeexay “si boobkii ay doorashada kula kaceen ay ummadda u ilowsiiyaan”.
Wafuuda oo isugu jirtay odayaal, haween iyo dhalinyaro ayaa kamid ahaa taageereyaasha Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, “madaxweynaha” Galmudug garabka Ahlu Sunna.
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay “in ay si juujuub ah” doorasho ugu qabatay Dhuusamareeb, taasoo uu kusoo baxay Axmed Cabdi Qoor-qoor. Odowaa wuxuu kamid yahay murashaxiinta diidey natiijadaas.
Guriceel ilaa Dhuusamreeb Sida aan baraha bulshada kala wada soconay, waxaa ciidamadii xamar laga daabulay ee la geeyay deegaanada Galmudug si doorashada loogu boobo ay shalay hor istaag ku sameeyeen, odayaal, haween iyo dhalinyaro reer Galmudug ah oo u socotay si ay uga qayb galaan wicitaan uu u sameeyay Sh Shakir.
Previous articleWareysigii Farmajo: Universal Ma Warbaahinta Qaranka ayey Ku biirtay?
Next articleKhilaaf ka dhashay isku shaandheynta golaha Wasiirada & Fahad oo diiday in la bedelo Cawad